दैनिकी राशिफल : वि.सं. २०७६ साउन ६। सोमबार। इ.स. २०१९ जुलाई २२। - Sutra TV Sutra TV
दैनिकी राशिफल : वि.सं. २०७६ साउन ६। सोमबार। इ.स. २०१९ जुलाई २२।
मेष : आफ्नो बच्चाको कार्यले तपाईंले धेरै खुशी दिन सक्छ। ठूलो योजना र विचारहरू भएको कसैसँग तपाईँको आकर्षण हुनेछ – कुनै पनि निवेश गर्नुअघि व्यक्तिको विश्वसनीयता र प्रामाणिकता प्रमाणित गर्नुहोस्। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यलाई लिएर केही चिन्ता हुन सक्छ। तपाईंले वास्तविकताहरुसँग सामना गर्नाले प्रियलाई बिर्सिनु पर्नेछ। कुनै पनि नयाँ संयुक्त उद्यम र साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्नबाट बच्नुहोस्। आज तपाईंले गरेको स्वयंसेवक कार्यले तपाईंले सहयोग गर्नहरूलाई मात्र नभएर तर तपाईंले थप आफैलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न पनि मद्दत गर्नेछ। आज तपाईंलाई एकजना आफन्तले आश्चर्य दिन सक्छ, तर यसले तपाईंको योजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ।
वृष : तपाईंको मनलाई अनावश्यक विचारहरूले कब्जा गर्न सक्छन्। खाली मस्तिष्क शैतानको कार्यशाला हुने हुनाले शारीरिक व्यायामहरूमा आफूलाई संलग्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आमाबाबुको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ र तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो प्रेमको वर्षा गर्नेछन्। तपाईंले प्रेमको पीडा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। आज आराम गर्नको लागि केही समय पाउनुहुनेछ – तर बाँकी रहेका कामले तपाईंलाई बस्न दिनेछैन। तपाईंले अप्रत्याशित स्रोतबाट महत्त्वपूर्ण निमन्त्रणा प्राप्त गर्नु हुनेछ। तपाईंको जोडी अरूको प्रतिकूल प्रभावमा फँस्न सक्छ र तपाईंसँग झगडा गर्नेछ, तर तपाईंको प्रेम र दयाले सबैलाई मिलाउनेछ।
मिथुन : अनावश्यक तनाउ र चिन्ताले तपाईंका जीवनको रस चुसेर र तपाईंलाई सुक्खा पार्न सक्छ। यिनीहरूबाट उन्मुक्ति पाउनु राम्रो हुनेछ अन्यथा यिनीहरूले मात्र तपाईंको समस्या बढाउन सक्छन्। लामो अवधिको दृष्टिले लगानी गरिनु आवश्यक छ। “परिवार, छोराछोरी र साथीहरूसँग समय बिताउनाले तपाईंलाई ऊर्जा सुधारमा सहायत मिल्नेछ।” प्रेमी जीवन आज सुन्दर रूपमा साँच्चै फूल्नेछ। आफ्नो बौद्धिक शक्तिको प्रयोग आफ्नो फाइदाको लागि गर्नुहोस्। यसले व्यावसायिक परियोजनाहरू पूरा गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ र नयाँ विचार दिनेछ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
कर्कट : तपाईं दीर्घ रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा मित्रहरूले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नेछन्। आफ्नो प्रियसँग वनभोजमा गएर आफ्नो बहुमूल्य समयलाई पुनर्जीवित गर्नुहोस्। वरिष्ठ स्तरमा काम गर्दै गर्ने मान्छेबाट केही विरोध खडा भए तापनि – अझै पनि – तपाईँले शान्तिले काम गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। पुरानो कुनै मित्रले तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ र यस दिनलाई अविस्मरणीय दिन बनाउने सम्भावना छ। तपाईंको वैवाहिक जीवन राम्रो बनाउने प्रयासले आज आशा गरेकोभन्दा राम्रो फल दिनेछ।
सिंह : तपाईंको हंसमुख स्वभावले अरूलाई खुसी राख्नेछ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईंले प्रेम गर्नेहरूलाई उपहार दिने र उनीहरूबाट प्राप्त गर्ने शुभ दिन। प्रेम असीम छ, प्रेम असीमित छ; तपाईंले अघि पनि यी कुराहरू सुनेको हुनुपर्छ। तर आज, तपाईंले यसलाई अनुभव गर्नुहुनेछ। शुरू गरेका नयाँ जिम्मेवारीबाट आशा कम हुनेछ। आफ्नो कुराकानीमा स्वाभाविक हुनुहोस् किनभने एउटा कार्यले तपाईंलाई कतै न कतैको बनाइदिन्छ। विवाह पछि पाप उपासना हुन्छ, र तपाईंले आज धेरै उपासना गर्न सक्नु हुनेछ।
कन्या : मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन् र तपाईंलाई खुसी राख्नेछन्। अनियोजित स्रोतबाट पैसा लाभ हुनाले आजको दिन उज्यालो हुनेछ। उचित संवाद र सहकार्यले जोडीसंगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ। आज तपाईंको आत्मीय भएर जोडिने अनुरोध गर्ने कसैसँग भेट हुने बलियो सम्भावना छ। फाइदाजनक दिन – त्यसैले उँभो उठ्नुहोस् र अगाडि जानुहोस् किनभने राम्रो अवसरले तपाईंलाई पर्खिरहेको छ। एउटा लाभदायी दिन किनकि केही कुराहरू तपाईंको पक्षमा जाने देखिन्छ र तपाईं संसारको शीर्षमा हुनुहुनेछ। आज, तपाईं फेरि आफ्नो जोडीसँग प्रेममा पर्नु हुनेछ।
तुला : मानसिक शान्तिको लागि आफ्नो तनाउ बाहिर निकाल्नुहोस्। तपाईंलाई व्यापार क्रेडिटको दृष्टिकोणले भेट गर्न आउनेहरूको वास्ता नगर्नुहोस्। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। तपाईंले उनीहरूलाई ध्यान दिनुहुँदैछ भन्ने महसुस गराउन उनीहरूको आनन्द र दुःखमा आफैलाई संलग्न गराउनुहोस्। एकतर्फे मायाप्रीतिले तपाईंको मुटु मात्र दुख्नेछ। काममा आजको दिन एउटा अद्भुत दिन जस्तो देखिन्छ। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। आज तपाईंको जोडी आफ्नो कामसँग यति आशक्त हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईंले उदास महसुस गर्नु हुनेछ।
वृश्चिक : आफ्नो निराशावादी मनोवृत्तिको कारण तपाईं कुनै प्रगति गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। यो तपाईंलाई चिन्ताले आफ्नो सोच्ने शक्ति घटेको छ भन्ने महसुस गर्नको लागि सही समय हो। उज्यालो तर्फ हेर्नुहोस् र तपाईंले आफ्नो विवेकमा निश्चित परिवर्तन भएको पाउनु हुनेछ। वित्तीय अवरोधबाट बच्नको लागि आफ्नो बजेट हेर्नुहोस्। साँझमा छोराछोरीसँग केही सुखद समय बिताउनुहोस्। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। नयाँ परियोजनाहरू र योजना लागू गर्न राम्रो दिन। तपाईं आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सामानको अतिरिक्त हेरचाह गर्न आवश्यक छ। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंको यो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पूर्वसन्ध्या हुन सक्छ।
धनु : “तपाईंले आफ्नो दीर्घ रोगसँग सामना गरे झैं आत्म विश्वासलाई वीरताको सार हो भन्ने जान्नुहोस्।” तपाईं आज आफ्नो पैसालाई लिएर समस्यामा पर्नुहुनेछ – तपाईंले बढी खर्च गर्नुहुन्छ वा आफ्नो वालेट गलत ठाउँमा राख्नु हुनेछ – बेवास्ताले गर्दा केही घाटा निश्चित छ। परिवारको वातावरण बिग्रिन्छ। प्रेम र रोमान्सले तपाईंलाई आनन्दित मुडमा राख्ने थिए। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग बातचीत गर्दा आफ्ना कान र आँखा खुल्ला राख्नुहोस् – किनकि तपाईंले एउटा मूल्यवान टिप पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। कसैले वैवाहिक जीवन झगडा र यौन हो भनेर सोच्ने गर्छन्, तर आज सबै निर्मल हुनेछ।
मकर : आध्यात्मिक जीवनको लागि जरूरी भएको तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्नुहोस्। राम्रो नराम्रो सबै दिमागको माध्यमबाट आउने हुनाले मन जीवनको द्वार हो। यसले जीवनका समस्याको समाधान गर्नमा मद्दत गर्छ र चाहिएको प्रकाश प्रदान गर्दछ। संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। गलत समयमा गलत कुरा नभन्ने प्रयास गर्नुहोस् – तर तपाईंका प्यारा मान्छेहरूलाई चोट पुग्ने ध्यान गर्नुहोस्। प्रेम वसन्त जस्तै हुन्छ; फूल, हावा, घाम, पुतलीहरु। तपाईंले आज रोमान्टिक कुतकुती महसुस गर्नु हुनेछ। कलाकार र काम गर्ने महिलाहरूको लागि यो दिन राम्रो फाइदा दिने दिन हुनेछ। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। तपाईंलाई आज लामो समय पछि आफ्नो जोडीबाट साँच्चै मायाले भरिएको र न्यानो अंगालो प्राप्त हुनेछ।
कुम्भ : तपाईंलाई ढाक्ने र तपाईंको प्रगतिमा बाधा गर्ने दुःखलाई टाढा फ्याँकिदिनुहोस्। कुनै पनि लामो अवधिको निवेश नगर्नुहोस् र आफ्ना असल मित्रसँग बाहिर गएर केही सुखद समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग आफ्नो तालमेल सुधार गर्न सही मौका हुनेछन्। आज कार्डहरूमा प्रेमको पीडा सामना गर्नु पर्ने सम्भावना देखिन्छ। तपाईंलाई यात्राले नयाँ व्यापारको लागि अवसर दिनेछ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। अनपेक्षित अतिथिको कारणले तपाईंको योजनामा बाधा पर्ने सक्छ, तर यसले तपाईंको दिन राम्रो हुनेछ।
मीन : आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंलाई साँच्चै आनन्द आउने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको आशा अनुसार पैसाको लाभ हुनेछैन। तपाईंले छोराछोरी वा तपाईं भन्दा कम अनुभवीहरूसँग धैर्य धारण गर्नुपर्छ। अचानक भएको रोमान्टिक तर्कले तपाईंलाई भ्रममा पार्न सक्नेछ। यो अन्य देशहरूमा व्यावसायिक सम्पर्कका सुधार ल्याउने एउटा उत्कृष्ट समय हो। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। आज आफ्नो जोडीले तपाईंको पीडा क्षण मै निकाल्न सक्छन्।
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २६ गते मंगलबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १२
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २४ गते आइतबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १०